Akụkọ - Ọ dị mma iji njedebe barb na eriri PTFE ejiri akwa akwa
OEM & omenala
PTFE Hose nwere oyi akwa mkpuchi
PTFE breeki Hose
Mgbakọ PTFE Hose
Gịnị mere Besteflon
Ọ dị mma iji njedebe barb na eriri PTFE nwere akwa akwa
Ndị mmadụ nwere ike ịjụ ma ọ dị mma iji eriri mmanụ ọkụ PTFE kechie nchara na njedebe dabara adaba nke nwere eriri eriri ọkọlọtọ na sistemụ mmanụ carb dị ala.
Ndị mmadụ nwere ike chọọ ịgbanwe ihe niile ígwè braided mmanụ ụgbọala hoses na PTFE ndị, na nwere barb kwesịrị ekwesị agwụ a di na nwunye nke ebe, na-awagharị awagharị ma ọ ga-arụ ọrụ?
PTFE bụ nnukwu nhọrọ maka sistemu mmanụ ọkụ mana ị ga-eji akwa akwa eji emegharị ma ọ bụ crimped AN. Ị nwere ike ịlele nkọwa ndị dị n'okpuru maka ụdị njedebe abụọ a:
1, The PTFE reusable adiana sooks ọgwụgwụ dị mfe iji wụnye na onye ọrụ enyi na enyi, nke na-eji a abụọ akụkụ usoro na-sooks na ebe. Site na nhazi mkpakọ pụrụ iche, enwere ike iji ya mee ihe n'emebighị nkwonkwo ahụ, na ntuziaka nkwonkwo eri nwere ike igbochi mmebi nke tube dị n'ime. Nke Njikọ eriri PTFEna mechanically clamped na PTFE sooks core iji nye kasị ukwuu nwere ike akara, na igwe anaghị agba nchara elu efere na-clamped iche iche iji nweta kasị ukwuu ga-ekwe omume sooks na-ejide ike. Ha dị ntakịrị arọ, mana na-ekwu na ha nwere usoro njigide ụdọ dị mma karịa ịkwanye mkpọchi.
2, Crimped ọkpọkọ oyiyi akwa na-ejikarị na akụrụngwa. Ha na-ewu ọtụtụ hoses n'ihi na ọ na-achọ ka a hydraulic pịa na a kpọmkwem ebu ka nke ọma crimp nke olu akwa na njedebe nke sooks. Igwe na ihe ndị a na-akpụ akpụ na-adịkarị ọnụ, yabụ na ị gaghị ahụ ndị mmadụ n'otu n'otu ma ọ bụ obere ụgbọ mmiri na-eji ha. Ọdọ mmiri ahụ crimped chọrọ ka a ga-ejighachi olu akwa crimp ọhụrụ, mana a na-ewere ya dị ka ngwa kachasị ike na nke a pụrụ ịdabere na ya ma ọ bụrụ na akpọchie ya nke ọma.
Ngwaahịa Besteflonigwe anaghị agba nchara PTFE mmanụ ọkụ nwere mmechi mmeghari nke nwere ike iji ya rụọ ọrụ, ma ọ bụ akwa akwa akwa na-ejedebe n'ọtụtụ nha AN6, AN8, AN10. Ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ ajụjụ gbasara nke a, kpọtụrụ ndị otu ahịa anyị n'efu na sales02@zx-ptfe.com
Black ptfe sooks maka ụgbọ ala ụlọ ọrụ
Oge nzipu: Nov-06-2021
Ozi kachasị ọhụrụ na usoro nke ụlọ ọrụ anyị na ihe ọmụma ụlọ ọrụ dị mkpa nke PTFE HOSE.
Ọ dị mma iji nchara nchara na braide...
brek: Cunifer ọkpọkọ ma ọ bụ SS PTFE hoses? |...
Ngwa / ahịrị: Nzaghachi chọrọ n'aka y...
adreesị: Mpaghara ụlọ ọrụ Sijiaolou, Boluo, Huizhou, Guangdong, China
© Nwebiisinka - 2020-2022: Ikike niile echekwabara. Ngwaahịa na-ekpo ọkụ - map saịtị
ptfe mkpuchi mkpuchi, ptfe hose, Ebe mgbaze Ptfe Tube, Ptfe Hose gbagọrọ agbagọ - 939/939b, ptfe eriri akwa, 6an Ptfe Hose Assembly,